Ọ bụrụ n’ị na-achọ igwe nwere igwefoto mara mma, echefula Cubot X50 | Gam akporosis
Igwe ihe igwefoto ohuru di elu, X50 sitere na Cubot, n'ikpeazụ a na-ere ahịa taa. Ama a bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ ngwaọrụ mkpanaka nwere igwefoto dị elu na ngwaike nwere ike iru ihe ọ bụla achọrọ.
Dị ka ọnụ na nnukwu ihe mmetụta, Cubot X50 kwadebe igwefoto quad dị ike iji were foto kacha mma na vidiyo na ọnọdụ ọ bụla. Firmlọ ọrụ na nke a chọrọ inye ndị niile na-azụ ihe nnukwu ihe mmetụta dị ukwuu, igwefoto mara ezigbo mma, igwe dị ike yana ihe mmetụta nke anọ a na-akpọ photosensitive.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Cubot X50
2 Ihe nhazi iji kwekọọ
3 Ram na nchekwa iji chekwaa
4 Batrị ga-arụ ọrụ ụbọchị niile
5 64 MP Samsung ihe mmetụta maka isi anya
6 Njikọta na sistemụ arụmọrụ
7 Nnweta Cubot X50
Nkọwapụta teknụzụ nke Cubot X50
Cubot X50 wuru gburugburu panel 6,67-anụ ọhịa, okpokolo niile bụ ihuenyo, ọ nweghị okpokolo agba ma ọ bụ akụkụ ma ọ bụ elu ma ọ bụ ala. Ọ bụ otu akụkụ ịtụle ịhụ na oke ahụ mere ka ọ bụrụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-erite uru nke ya niile maka iji ngwa na egwuregwu vidiyo.
Ihuenyo ahụ bụ HD zuru oke + na mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ, akụkụ ya bụ 20: 9 na akụkụ nlele na-enye gị nnukwu obosara. E wezụga nke a, akụkụ nlezianya bụ imewe, ma n’ihu na n’azụ, nkọwa dị mkpa.
Maka anya azụ, Cubot X50 Ọ na-eji iko matte AG azụ iji gosipụta ụdị okomoko, agba na-egosi ụda gradient mgbe ekwentị natara ìhè anyanwụ. Site na iko AG a, ịkwesighi iche gbasara mkpịsị aka na smudges site na ịghara itinye ya. A na-enweta ya na agba abụọ, nwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ihe nhazi iji kwekọọ
El Cubot X50 na-agbakwunye n'ime mgbawa Helio P60 site na MediaTek, octa-core processor nke nwere okpukpu abuo 73GHz Cortex A2 na abuo abuo nke 53GHz Cortex A2. A na-eji nke ikpeazụ ahụ eme ihe maka arụmọrụ ka ukwuu na ngwa, na mgbakwunye oriri dị ala ma na-arụ ọrụ zuru oke na usoro ọkara.
Na graphic ngalaba ọhụrụ smartphone si Cubot nwere Mali-G72 MP3 GPU na 800MHz, a na-ahụ arụmọrụ ahụ na ụdị ngwa niile, gụnyere egwuregwu kachasị ọhụrụ na ahịa. O zuru ezu maka ụdị arụmọrụ niile na arụmọrụ ahụ dị ịrịba ama na bench dị iche iche nyocha.
Ram na nchekwa iji chekwaa
Cubot X50 bụ ekwentị nwere ike ibugharị ụdị ngwa ọ bụla ekele maka ebe nchekwa RAM arụnyere dị ka ọkọlọtọ, modul ahụ bụ 8 GB. Ma na-amalite na-amalite ngwa ọ ga-jubigakwara ókè na ọ na-ekwe nkwa na-arụ ọrụ na ọhụrụ nsụgharị nke gam akporo na obere mgbalị.
Na mgbakwunye, smartphone ọhụrụ nwere 128 GB nke nchekwa, karịa ohere zuru oke iji debe foto gị niile, vidiyo na akwụkwọ dị mkpa. Ekwentị nwere igwefoto quad na ihe dị elu dị elu ga-enwe nchekwa iji chekwaa ọtụtụ ozi.
Batrị ga-arụ ọrụ ụbọchị niile
Ndị ọrụ na-achọkarị ekwentị na-arụ ọrụ na o nwere batrị nke na-adịgide ụbọchị niile iji nwee ike iji ya mgbe achọrọ ya. Zuru oke maka ojiji nkịtị dịka ịkpọ oku na ịnweta oku mgbe ị na-arụ ọrụ ọtụtụ awa na-enweghị nhụjuanya.
Ọ gụnyere batrị 4.500 mAh, maka ụgwọ ọ bụla nke ihe karịrị otu elekere ọ ga-abụ ihe karịrị otu ụbọchị na-enweghị ịgagharị na chaja, o doro anya na ọ bụ otu n'ime njirimara ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị dị elu na batrị dị ike. Na Cubot X50 dị ka ndị ọzọ na-ejikọta ngwa ngwa ma pụta ìhè maka ịrụ ọrụ nke ọma yana ekele gam akporo 11.
64 MP Samsung ihe mmetụta maka isi anya
Na mgbakwunye na iguzo n'ọchịchị, ndị X50 na-enwu na ìhè nke ya mgbe ị na-ese foto mgbe ị na-arịgo dị ka isi ihe mmetụta Samsung S5KGW1 nke 64 megapixels. Nke a ma e wezụga foto ndị dị elu na-enyekwa nhọrọ ịdekọ vidiyo na Full HD na vidiyo na mkpebi dị elu.
Cubot X50 na-ejikwa ihe mmetụta atọ ọzọ akwa, nke abụọ bụ igwe 16 megapixel buru ibu, yana nke mbụ ọ ga-adị mkpa maka ịwe onyonyo n'akụkụ kacha mma. Nke atọ bụ oghere megapixel 5 megapixel ma dị mma karịa ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ dị n'etiti ahịa.
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịkọwa ihe mmetụta nke anọ, ọ bụ 0,3 megapixels, ma e wezụga njide na obere ọkụ ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma, nke ga-enye gị ohere ịse foto na-achọpụtaghị na ọ bụ n'abalị. Ọ bụrụ na ị nọ n’ebe ndị na-enwu gbaa ọ ga-abụ nkwado zuru ezu maka anya m atọ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu. Ọ gụnyere ụdị akpọrọ "Super Night Mode", zuru oke maka ịde ụdị onyonyo niile na ọnọdụ dị ala.
Igwe Cubot X50 ga-abụ ngwaọrụ 4G Site na itinye Helio P60, na nke ahụ na-agbakwunye njikọta ndị ọzọ dịka Wi-Fi, Bluetooth, GPS na NFC. O nwere ọdụ ụgbọ mmiri, ọ bụ ezie na enwere ike iji Bluetooth mee ihe maka ekweisi ikuku, na-enwe nkasi obi mgbe ị na-eji ha.
X50 na-abịa na ụdị sọftụwia kachasị ọhụrụ, akpụkpọ ụkwụ nwere gam akporo 11 na mmelite sistemụ kachasị ọhụrụ, yabụ ọ ga - eme gị nchekwa ma a bịa na nchọgharị ma jiri ya dị ka ekwentị. Bụ nsụgharị dị ọcha ga-eme ka ọ bụrụ ọnụ ọsọ ọsọ ma na-ekwe nkwa mmelite dị iche iche n'aka onye nrụpụta.
Nnweta Cubot X50
Cubot X50 Global Sale bidoro taa Mee 17 na ego efu $ 169,99. Mbelata ego ga - amalite site na Mee 17 ruo May 20 site na ụlọ ọrụ Aliexpress. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ foto ma ọ bụ onye na-achọ ekwentị igwefoto dị ike, lekwasị anya na Cubot X50.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ọ bụrụ n’ị na-achọ igwe nwere igwefoto mara mma, echefula Cubot X50
Ngwa ụra kacha mma na gam akporo